Shiinaha oo tababar iyo qalab u ballan qaaday kalluumeysatada Soomaaliya - Halbeeg News
Shiinaha oo tababar iyo qalab u ballan qaaday kalluumeysatada Soomaaliya
MUQDISHO(HALBEEG)- Dowladda Shiinaha ayaa kalluumeysatada Soomaaliyeed u ballan qaaday in ay qalab iyo tababarba siin doonto si loo kordhiyo wax soo saarka suuqa kalluumeysiga Soomaaliya.
Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Bidhaan Warsame ayaa kulan la yeeshay safiirka Shiinaha ee Soomaaliya Qin Jian si loo kordhiyo xiriirka Kalluumeysi ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha.
Labada masuul ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee ku aaddan suuqa kalluumeysiga.
Wasiirka kalluumeysiga oo kulankan ka hadlayay ayaa sheegay in uu aad u daneynayo tababarrada iyo maalgashiga Shiinaha ee suuqa kalluumeysiga Soomaliya sida in la helo qaboojiyeyaasha lagu keydiyo Kalluunka, dhisadda dekadaha yaryar ee laga dhoofiyo kalluunka, qalabka warshadeynta kalluunka iyo in suuqyada Shiinaha loo furo kalluunka laga soo saaro xeebaha Soomaaliya.
Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Bidhaan ayaa intaasi ku daray in Soomaaliya ay kheyraad fara badan ka buuxaan balse aan laga faaiideysan.
Soomaaliya oo leh mid kamid ah xeebaha ugu dheer Afrika ayaa waxaa ragaadiyay dagaallo sokeeye oo muddo 30 sano ku dhow dalka ka socda.
Hay’adda USAID iyo Midowga Yurub ayaa u arka suuqa kalluumeysiga Soomaaliya inuu yahay mid ka mid meelaha uu kasoo kaban karo dhaqaalaha Soomaaliya.
Qaramada Midoobay oo cambaareeysay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho